Akụkọ - Otu esi ejikwa ụlọ ọrụ nhazi CNC nke ọma
Processinglọ ọrụ nhazi CNC mgbe afọ 2019 gasịrị, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eche na ọ na-adalata iwu ahịa. Otu esi ejikwa ụlọ ọrụ nhazi CNC abụrụla isiokwu nke ọtụtụ ndị ọchụnta ego. Wally igwe teknụzụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ nhazi CNC ruo ọtụtụ afọ, na-echekwa nsogbu dị otú ahụ ihu. Gịnị ka anyị ga-eme?
N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ ọrụ nhazi CNC bụ nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe. N'anya ndị mmadụ na-adịghị mma, ọ nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ nrụpụta kachasị dị ala. N'anya ndị na-ahụ anya, ọ bụ ezigbo ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enweghị ndụ ahịa nke ngwaahịa, yana enweghị ọdịiche dị n'etiti oge-oge na oge kachasị elu.
Iji lanarị nke ọma na ụlọ ọrụ nhazi CNC, ihe kachasị mkpa bụ mma. Ogo ga-abụrịrị ndụ nke mmepe ụlọ ọrụ. Ọtụtụ ndị ahịa ụlọ ọrụ akụrụngwa na-esiri ike ịzụlite ndị na-eweta ọrụ CNC dị elu. Isi ihe kpatara ya bụ na ogo ngwaahịa adịghị elu, nke na-emetụta nzukọ na nnyefe nke ndị ahịa. N'aka nke ọzọ, ọ na-etinye aka na nhazi CNC N'akụkụ nke ọzọ, ọ bụ ndị ahịa enweghị ike ịchọta ndị nrụpụta CNC dị elu.
Otu esi arụ ọrụ dị mma na mma ngwaahịa, nke mbụ, anyị kwesịrị ị attentiona ntị na ụkpụrụ, ma mejuputa ụkpụrụ guzobere nke ọma. N'oge usoro mmejuputa iwu, enweghi ego, dika ịbịaru ụkpụrụ, ụkpụrụ ọrụ, ụkpụrụ nyocha, wdg. Njikọ ọ bụla nke ngwaahịa a sitere na akụrụngwa na mbupu na-achịkwa ma mejuputa ya dịka ụkpụrụ ahụ si dị, iji wee mepụta ezigbo ụlọọrụ ọdịbendị ikuku, ogo ga-adị mma ma dịkwa mma Ọ ga-enwerịrị ahịa.
N'ime atumatu ahia nke 2019, teknụzụ volley igwe na-ezube iwebata ngwa ahịa Japanese na-egwe ọka na-ebugharị ngwa ngwa ọzọ, na-agbasawanye ikike nrụpụta yana ịre ndị ahịa ọhụụ ọhụụ.